Farriinta Farmaajo 14 Oktobar: "Dadkii dhintay, waxay mudnaayeen nolol qurux badan, balse.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Farriinta Farmaajo 14 Oktobar: “Dadkii dhintay, waxay mudnaayeen nolol qurux badan, balse..”
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay sanadguuradii 4-aad ee qarixii Soope oo boqolaalka qof ay ku dhinteen.
Farmaajo ayaa farriin uu soo saaray ku sheegay farriintiisa Xuska Qaraxii 14-ka Oktoobar 2017- in qof kasta oo Soomaaliyeed uu xasuusnaan doono dareenkii murugada lahaa ee ka dhashay weerarkii arxan darrada ahaa ee lagu waayeay muwaadiniin Soomaaliyeed oo u taagnaa in ay door weyn ka qaataan horumarka dalka, sida uu yiri.
“Waxay ahaayeen muwaadiniin mudnaa nolol qurux badan, balse ay argagixisadu u qoonsadeen noloshoodii sharafta badnayd. Inkasta oo ay dhacdadaasi tahay mid uurkutaallo badan inagu reebtay, misna waxa ay ahayd dhacdo daaha ka feydey sida wanaagsan ee ay shacabka Soomaaliyeed isu caawiyaan, oo isu garab istaagaan” ayuu farriintiisa ku yiri Farmaajo.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan baaritaanka qaraxaasi iyo tallaabo laga qaaday kooxdii geysatay, xilli ay weli sii socdaan qaraxyada iyo falalka dilka ee Alshabaab ka wado caasimadda waqtigan oo muddo xileedkiisu dhammaay muddo 7 bilood ahna uu xilka ku joogo doorasho la’aan.
Xuska 14 Oktobar
Previous articleDagaal ka dhashay Garsoore la diidan yahay oo ka socda magaalada Beirut (Akhriso: Yaa ku dagaalamaya..?)
Next articleQareen caan ah oo shaaciyay sida Somaliya iyo Kenya u kala helaan Xuduudka Badda ee ICJ sameysay